ညီလာခံထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းရေချိုးခန်းသို့မဟုတ်အဝတ်လျှော် - တရုတ်စက်ရုံ - Cixi Wenap အင်တာနေရှင်နယ်ထရေးဒင်း Co. , Ltd မှ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > PEX ပိုက်ပြင်စနစ် > PEX ပိုက်ပြင် System ကိုကြေးဝါ Fittings > ရေချိုးခန်းသို့မဟုတ်အဝတ်လျှော်ညီလာခံ
ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန် PPR ပိုက် & amp ပါ၏ fittings, PEX ပိုက် & amp; fittings, ကြေးနီ fittings နှင့်ပိုက်ရေပိုက်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်ရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင် get ပြီးနောက် 24 နာရီအတွင်းပုံမှန်အားဖြင့်ကိုးကား; သင်စျေးနှုန်းအရအလွန်အရေးတကြီးလျှင်, pls ။ မှာတစ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းချက်တင်ပေါ်မှာမက်ဆေ့ခ်ျကိုစွန့်ခွာသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့လျအရေအတွက်ကပြောပြ, ငါတို့သည်သင်တို့၏စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကိုဦးစားပေးမှတ်ပါလိမ့်မယ်။
ရေချိုးခန်းနှင့်မီးဖိုချောင်အခန်းကို Hardware နဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်း:
တံခါးကိုစီးရီးလျှောကြမ်းပြင်နွေဦးစီးရီး, တံခါးကိုပိုမိုနီးကပ်စွာစီးရီး, ဖန်တံခါးကိုကလစ်စီးရီး, ဖန်တံခါးလက်ကိုင်စီးရီး / ရေချိုးခန်းဖန်ကလစ်စီးရီးရေစိုခံစီးရီး / ကာစရာကုလားကာဘီးစီးရီး / လှေကားထစ် handrail စီးရီး / ဖန်တံခါးကို / သော့ခတ် / အော်တိုတံခါးကိုစီးရီး။
အဆိုပါပန်းရေချိုးခန်း၏ကုန်ပစ္စည်း Parameter သို့မဟုတ်အဝတ်လျှော်ညီလာခံ
ANSI / ASME, JIS ဘီ, မာခ်, MSS, Din, BS, GB ကို, SH, HG စသည်တို့ကို
ထုတ်လုပ်တဲ့ယန္တရား, ဆားစမ်းသပ်ခြင်း, Durometer နှင့် Coating ထူ tester မှုတ်ဆေးဘူး
သံမဏိ, ကြေးဝါ, ကြေးနီ, လူမီနီယံ, ကာဗွန်သံမဏိ, အလွိုင်းသံမဏိစသည်တို့ကို
Zn-များတွင်လည်းကောင်း, နီ-များတွင်လည်းကောင်း, CR-များတွင်လည်းကောင်း, ဦးတင်ခြင်, ကြေးနီ-သင်းကျစ်ပြားလွမ်းသူ့ပန်းခွေအောက်စီဂျင်စေးပက်ဖြန်းခြင်း, အပူစွန့်, ပူ-သို့ကျဆင်းလာ galvanizing, အနက်ရောင်အောက်ဆိုဒ်အပေါ်ယံပိုင်း, ပန်းချီ, powdering, အရောင်သွပ်-ချထားတဲ့အပြာအနက်ရောင် ဇင့်-ချထားတဲ့, သံချေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေနံ, အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးတိုက်တေနီယမ်အလွိုင်း, ငွေဖလား, ပလပ်စတစ်, electroplating, etc anodizing
100 ကို --- ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်အပေါ်မူတည်ထားတဲ့ 1000pieces;
T / T 30% ကဆင်းပေးချေမှု, သင်္ဘောမရောက်မီပေးဆောင်ခံရဖို့ဟန်ချက်ညီ။ သို့မဟုတ် L / C ကို။
OEM အသစ်အမှိုအပါအဝင်ထုတ်လုပ်မှု၏ 45 ရက်အမိန့်, ရှိရင်းစွဲထုတ်ကုန်သာအသက် 30 -35 ရက်ပတ်လုံးယူမှုအတည်ပြုချက်ပြီးနောက်လိုအပ်ပါတယ်
ကုန်ပစ္စည်း Feature ကိုနှင့်ပန်းရေချိုးခန်း၏လျှောက်လွှာသို့မဟုတ်အဝတ်လျှော်ညီလာခံ
1) ။ အဆိုပါထုတ်ကုန်များ၏တသမတ်တည်းနှင့်ယူနီဖောင်းအရည်အသွေးကို။
2) ။ အဆိုပါကုန်ပစ္စည်းများကျွန်တော်တို့ရဲ့ agreed အချိန်အတွင်းမှာရှိပါတယ်။
3) ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးအာမခံချက်မှအများဆုံးယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်း။
4) ။ အချိန်အတွက်မဆိုအချက်မှာသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်။
5) ။ သင့်ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များကို, ဒီဇိုင်းများ, သတ်မှတ်ချက်များသို့မဟုတ်သင်၏နမူနာအပေါ်အခြေခံပြီးထုတ်ကုန်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။
6) ။ အဆိုပါထုတ်ကုန်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များသာတစိတ်တပိုင်းပြသ။ သင်ပိုမိုတိကျတဲ့ထုတ်ကုန်သတင်းအချက်အလက်များလိုအပ်ခဲ့လျှင်, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
1. အတွင်းစိတ်ထုပ်ပိုး: PP အိတ်, ပူဖောင်းအိတ်, ပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးပြီးစသည်တို့ကို
2. ပြင်ထုပ်ပိုး: စက္ဏူထူ, သစ်သားအမှု, pallet စသည်တို့ကို
သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း:ပင်လယ်ပြင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်လေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသို့မဟုတ်customerâ€™ s ကိုလိုအပ်ချက်အရသိရသည်။
hot Tags:: တရုတ်ခုနှစ်တွင်ဖန်ဆင်းရေချိုးခန်းသို့မဟုတ်အဝတ်လျှော်ညီလာခံ, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, လက်ကား, ဝယ်, ဖောက်သည်စတော့အိတ်များတွင်အစုလိုက်, စျေး, Pricelist, စျေးနှုန်း, High Quality
ကြေးဝါကို Compression ကိုအင်္ကျီလက်
စံ Pex Lugged တံတောင်ဆစ်
ကြေးဝါကိုလျှော့ချရေးစင်တာသို့မဟုတ် End Tee